Lalam-pirenena fahadimy : gaboraraka ny fomba fiasa rehetra | NewsMada
Tsy misy tsy manao fomba fiasa gaboraraka amin’ iny lalam-pirenena fahadimy (RN 5). Miainga eto Toamasina mihazo an’ ny Fenoarivo Atsinanana, Soanierana Ivongo, Mananara Avaratra, Maroantsetra, Vavatenina. Hita taratra izany eo amin’ny mpitatitra sy ny
mpitandro filaminana manao ny sakana eny an-dalana ka mizaka ny vokany ny mpanjifa sy ny mpandeha.
Voalohany, tsy mitovy ny saran-dalana ampiharin’ny mpitatitra amin’ny zotra mandroso sy ny miverina. Mahatratra 7.000 Ar ny saran-dalana avy eo Toamasina mankany Fenoarivo Atsinanana. 10.000 Ar kosa ny miverina avy any Fenoarivo mankany Toamasina. Tsy fantatra ny antony, sady tsy manazava rahateo ny mpitatitra na ny kaoperativa. Santionany io taterina eto io saingy saika manao toy izany avokoa ireo taksibrosy amin’iny RN 5 sy ny RN 22 A (mankany Vavatenina) iny.
Taingimbe sy manome vola
Faharoa, eo koa ny fanaovana taingim-be, hatramin’ny fiara manao taxi-be aza, lasa mitatitra olona amin’ iny lalam-pirenena iny. Mijery fotsiny ireo zandary sy polisy raha ohatra ka manome 1.000 Ar hatramin’ny 2.000 Ar.
Raha ny fanadihadiana natao sy nifampiresahana tamin’ ireo mpamily ary ny hitan’ny maso nandritra ny fanohizana an’ i Soanierana Ivongo sy Toamasina, mahatratra 15 ny sakana ahitana polisy na zandary. “Andoavana vola 1.000 Ar hatramin’ny 2.000 Ar isaky ny sakana, raha tsy izay voatazona ny taratasy ary lasa mandoa 60.000 Ar indray vao mahazo azy”, hoy ny mpamily iray.
Nandritra ny fandalovan’ny filoham-pirenena tany Foulpointe, omaly, nangatahin’ireo ben’ny Tanàna ny hanamboarana ny RN 5. Misy ny tetikasa hanamboarana an’i Soanierana Ivongo-Mananara Avaratra-Maroantsetra, indrindra ny tetezana, fa tsy fantatra ny arabe raha atao godirao.